I-China Pops A Dent abavelisi kunye nabathengisi Uhlobo
Ixabiso lesalathiso seFOB (Fumana amaxabiso akutshanje) Iiseti ezili-1020-2999: $ 2.64
> = Iiseti ezingama-3000: $ 2.60
Ixesha lokukhokhela Ubungakanani (iiseti) 1 - 10020> 10020
Sebenzisa Izixhobo zokulungisa amazinyo
Igama lemveliso Iipops I-Dent
Inombolo yomzekelo: CA006
Izixhobo Iplastiki ye-ABS + intsimbi engenasici
Umbala mhlophe + mhlophe
Ubunzima (g) 365g
Ukupakishwa kwemveliso: Imibala IBHOKISI
Ubunzima bobunzima (kg): 21kg
Ubunzima bomzimba (kg): 20kg
Ubungakanani beCarton (cm): 89x58x40
Kulula & ngokukhawuleza-intonga nje, ukujija kunye nesifotho okanye i-ding ihambile!
1) Iphuhlisiwe kwaye isetyenziswe ziingcali ze-auto-boby
I-2) Uyilo olwahlukileyo lwe-patent-elinde i-arch yebhulorho yenza ithuba lokonzakalisa okongezelelweyo. Ezinye iinkqubo ngaphandle kogcino lwethu lwebroksi eyaziwayo ziyongeza ukongeza iimoto emotweni!
I-3) Uyilo lwenkqubo yokuncamathelisa olulindelweyo luqinisekisa ukususwa kwesifotho ngaphandle kwento eshiyekileyo, incangathi, ezinye iinkqubo zaziwa ngokushiya ngasemva.
4) Ukulungiswa kweentente phantse kuyo nayiphi na indawo kuso nasiphi na isithuthi.
5) Susa ngokulula imiphunga kwisichotho, iingcango zemoto, iinqwelo zokuthenga kunye nokunye ngaphandle kokonakalisa umphezulu wemoto yakho.
Ilula ukuyisebenzisa, amanyathelo amathathu nje alula kunye nePops-A-Dent isusa imiphunga.
ukusuka kwisichotho, iingcango zemoto, iinqwelo zokuthenga kunye nokunye, ngaphandle kokonakalisa umphezulu wemoto yakho.
I-Pops-A-Dent ikongela ixesha kunye nemali kwaye lolunye uqoqosho olunokubiza abaqeqeshi abaneendleko eziphezulu.
Egqithileyo Umgcini weNdebe yeValet
Okulandelayo: I-Vizclear HD Umbono weMoto yeVisor yelanga
Isixhobo sokuLungisa isiXhobo seMoto
INdebe yeNdebe yeMoto
Ukufakwa kweNdebe yeNdebe yeMoto
Ukulungiswa kweDent Car
Izixhobo zokuCoca imoto
Imoto ebambe iNdebe kabini
Sela imoto yokubamba
Umgcini weNdebe yeValet
Izixhobo zokuCoca imoto, Izibuko zelanga zangokwezifiso, Sela imoto yokubamba, Ipleyiti yePlastiki enokuphinda isebenze, Amacwecwe ePlastiki alukhuni, INdebe yeNdebe yeMoto eyandisayo,